Crack ကို အသုံးပြုခြင်း
Patch ကို အသုံးပြုခြင်း
Serial ကို အသုံးပြုခြင်း
Keygen ကို အသုံးပြုခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Key နဲ့ ထည့်သုံးနေသော်လည်း internet ချိတ်လိုက်တာနှင့် ထို program ရေးတဲ့သူက သုံးစွဲသူရဲ့ key တရားဝင် ဟုတ်မဟုတ် online ကနေ လှမ်းစစ်ပါတယ်။ ဒီလို တရားဝင်မဝင် စစ်ဆေးတဲ့ အပိုင်းကို hacker က အရင် ဖျက်ပစ်ထားပြီး ပြန်လည် ပြုပြင်ထားတဲ့ file ကို ပြောတာပါ။ Crack file တွေက size ကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်က အဲ့ဒီ program က update ပေးလို့ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် crack file အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီ program ဟာ နဂို မူလ တရားဝင်မဝင် စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းကို မဖျက်ခင် အခြေအနေရောက်သွားပြီး key တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆို ဒီ program က free သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
Image credit to http://www.soft-ddl.net
Patch က crack တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် file size သေးပါတယ်။ File မှာ ဒီ patch ကို ဘယ်သူလုပ်တယ် ဘာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ information တွေ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ patch က installed လုပ်ထားတဲ့ program ကို အချက်အလက်တွေ ထပ် ဖြည့်ပြီး crack file ရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ program အသေးစား တစ်ခုပါ။ သူ့အားနည်းချက်က crack နည်းလိုမျိုးပဲ program update လုပ်လိုက်ရင် အရင်အနေအထား ပြန်ရောက်သွားပြီး key မထည့်ပေးရင် ပြန်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
လူ တော်တော်များများက ဒီ serial ကို ဘာလဲ ဘယ်အတွက်ကြောင့် သုံးရလဲဆိုတာ သိပ်မသိကြပါဘူး။ serial ဆိုတာ ဒီ program ကို အမှန်တကယ် ဝယ်ထားသည်ကို မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားပြတဲ့ key ပါဝင်တဲ့ text file ဖြစ်ပါတယ်။ hacker တွေက ဒီ program ကို သူတို့ကို နာမည်တွေ website တွေ လိပ်စာတွေနဲ့ မှတ်ပုံတင် ဝယ်ပြီး ရလာတဲ့ key ကို လူအများ free သုံးရအောင် ဝေမျှ share ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ serial တွေမှာ ဝယ်တဲ့လူ နာမည် company နာမည် email နာမည် တွေ ပါတာကို မြင်ရမှာပါ။ အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ serial number ကို blacklisting ထဲ အသွင်းခံလိုက်ရပြီးဆိုရင်တော့ ဒီ serial နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ program ကို သုံးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Key generator ကို အတိုကောက် keygen လို့ ခေါ်ထားတာပါ။ ဒီ keygen တွေကတော့ ၄ နည်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါ။ serial ကတော့ key တစ်ခုတည်း ရနိုင်ပေမယ့် keygen ကတော့ အများကြီး ရနိုင်ပါတယ်။ သူက program activate ဖြစ်ဖို့ register လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ key နှင့် information တွေကို ထို program ရဲ့ file ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာမျိုး မရှိပဲ တိတိကျကျ ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ key တစ်ခုမရလျှင် နောက်တစ်ခု စသဖြင့် keygen ကို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ထုတ်ခိုင်းပြီး activate လုပ်လို့ရပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ key တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူတတ်ပါ။
အထက်ပါ ၄ နည်းထဲမှာ risk အန္တရာယ် အများဆုံးက Crack နည်းပါ။ ဒုတိယ Patch တတိယ Keygen စတုတ္တ serial လိုက်ပါတယ်။
Crack / Patch / Serial / Keygen တွေကို ဘယ်လို သုံးမလဲ
Crack ကို အသုံးပြုပုံ
အရင်ဦးဆုံး program ကို install လုပ်ရပါမယ်။ install လုပ်တဲ့အခါ trial version ဖြစ်ရပါမယ်။ သွင်းပြီးတဲ့အခါ crack လို့ ရေးထားတဲ့ folder ထဲက file ကို copy လုပ်ပြီး installed သွင်းလိုက်တဲ့ program ရဲ့ လမ်းကြောင်း (directory) ကို ရှာပြီး program တည်ရှိတဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ရပါမယ်။ ဒီလို လုပ်နေစဉ်အတောအတွင်း program ကို ဖွင့်ထားလို့ မရပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်သွင်းလိုက်တဲ့ program ရဲ့ icon က desktop ပေါ် ရောက်နေလျှင် ထို icon ကို right click -> properties ထဲက Open File Location ကို နှိပ်လိုက်ပါက installed လုပ်ခဲ့တဲ့ ထို program ရဲ့ နေရာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်လျှင် start menu ထဲက All programs မှာ ကြည့်လျှင် လောလောလတ်လတ် သွင်းထားတဲ့ program ကို လိမ္မော်ရောင်နဲ့ ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထို လိမ္မော်ရောင်နဲ့ ပြထားသည့် program နာမည်ပေါ် right click -> properties -> Open File Location ကနေတစ်ဆင့် ဝင်လျှင် ထို program ရဲ့ နေရာကို ရောက်ပါပြီ။ crack file ကို paste လုပ်တဲ့အခါ "This file already exists, do you want to continue and overwrite it?" လို့ မေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ YES နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ crack နည်း အသုံးပြုခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။ Crack နည်းစနစ်က program ရဲ့ trial version ကို ဖယ်ပြီး full version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ထို နည်းစနစ်က program version တစ်မျိုးအတွက်သာ ကောင်းပါတယ်။
Patch ကို အသုံးပြုပုံ
Patch က crack လိုမျိုး installed program ရဲ့ တည်နေရာမှာ (paste) နေရာချပေးရပါမယ်။ ထူးခြားတာ တစ်ခုက ဒီလို paste လုပ်တဲ့အခါ "This file already exists, do you want to continue and overwrite it?" လို့ မမေးပါ။ ဒါပေမယ့် paste လုပ်ရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ paste လုပ်ပြီးလျှင် ထို patch file ကို double click လုပ်ပေးရပါသေးတယ်။ ထိုအခါ patch ဒါမှမဟုတ် crack စာသားပါတဲ့ windows ငယ်တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ patch ဒါမှမဟုတ် crack အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်လျှင် patch လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ပြီးပါပြီ။
Serial ကို အသုံးပြုပုံ
Serial ဆိုတာ key လိုမျိုး ပါတဲ့ text file ဖြစ်ပါတယ်။ install လုပ်တဲ့အခါ program က key တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအခါ serial ထဲက key ကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အကယ်၍ program က install လုပ်ပြီးတာတောင်မှ key မတောင်းသေးဘူးဆိုရင် program ထဲ ဝင် Help ထဲက About ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ Registration ဒါမှမဟုတ် Activate ဒါမှမဟုတ် Unlock ဆိုတဲ့ စာသားတွေနဲ့ windows ငယ်တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ serial ထဲက key နဲ့ information တွေကို ဖြည့်သွင်းပြီး OK သို့မဟုတ် activate လုပ်လိုက်တာနဲ့ serial ထည့်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
Keygen ကို အသုံးပြုပုံ
Keygen က application တစ်မျိုးပါ။ သူ့ကို double click နှိပ်ပြီး run လိုက်တာနဲ့ windows ငယ်လေး တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ Generate ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီ program နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ key နဲ့ information တွေ ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက် ထပ်နှိပ်လိုက်လျှင် key နဲ့ information အသစ်ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီထဲက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ key နဲ့ information ကိုယူ ပြီးလျှင် program activation ထဲ ထည့်ပြီး activate လုပ်လိုက်တာနဲ့ Keygen အသုံးပြုခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Cracks တွေ patch တွေ serial တွေ keygen တွေ အတု အလိမ်တွေ မမိအောင် ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြသထားတဲ့ torrent sites တွေ private torrent site တွေကနေ မယူပါနှင့်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရှိပြီး download ဆွဲဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ .. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာတွေကနေ ယူပါ။
လူအများ အားပေးမှု အများဆုံးရရှိထားတဲ့ အုပ်စုတွေကနေ ယူပါ။
Download မလုပ်ခင် သက်ဆိုင်တဲ့ comment တွေကို သေသေချာချာဖတ်ပြီးမှ ယူပါ။
အကယ်၍ မရှိပါက ခဏတာ စောင့်စားလိုက်ပါ။ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ယူပါ။
ဒါဆို virus တွေ maleware တွေကင်းရှင်းတဲ့ cracks, patches, serials or keygens တွေ ရလာနိုင်မှာပါ။
Reference = http://www.torrent-invites.com/showthread.php?t=25364